News | Bosaso Media
Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ku magac-dheer Maadey ayaa xalay loo doortay guddoomiyaha ururka ONLF. Cabdiraxmaan waxaa uu ku dhashay Magaalada Qabridahar ee deeganaka Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxaana laga kaxeeyay halkaas isagoo yar oo waxaa la geeyay Magalaad Wajeer ee dalka Kenya sanadkii 1962. Wuxuu halkaas ku bartay qeybka mid ah waxbarashadiisa dugsiga hoose, kadib markii uu buuqa ka ...
Bugaagta Nabada 2019
Akhriska iyo barista aqoonta nabada waa nidaam aad u wanaagsan oo lagu kobcin karo laguna baahin karo nabada bulshada dhexdeeda. Waa hanaan aan u isticmaali karno sida dalka soomaaliya oo kale kaaso kasoo kabanaya khilaafaad saldheeraaday oo saamayey dhamaan qaybaha bulshada sida dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada. Hadaba barnaamujka Abaal marinta Caalamiga ah ee BOOKS for Peace 2019, Ayaa ...
MADAXWEYNE FARMAAJO OO U DHOOFAY NAIROBI
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u dhoofay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo uu kaga qayb-gelayo shirka dadweynaha iyo horumarka oo ay soo qaban-qaabisay Qaramada Midoobey. Shirkan oo uu hoggaaminaayo Sanduuqa Qaramada Midoobey ee Horumarinta Dadka (UNFPA) ayaa lagu jaangooynayaa qorsheyaasha loo dhan yahay ee dhinacyada horumarka iyo halbeegga sanadlaha ah ee heer qaaradeed iyo ...